Ogaden News Agency (ONA) – Shirweynaha Istanbul oo lasoo gebagabeynayo
Shirweynaha Istanbul oo lasoo gebagabeynayo
Hogaamiyayaasha caalamka, madaxda qaramada midoobay, wakiilada deeqbixiyayaasha iyo hay’adaha gargaarka kuwa caalamiga ah iyo kuwo aan dowliga ahayn, ayaa u fadhiyay shir laba maalmood ah.
Waxaa ujeedka shirku yahay sidii wax looga badali lahaa nidaamka wax looga qabto dhibaatooyinka bini’aadaminimo ee ka dhasha khilaafyada iyo dagaalada, masiibooyinka dabiiciga ah iyo isbadalka cimilada.
Ilaa 60 milyan oo qof, ayaa dunida ku guryo beelay, sababahaas awgood, ilaa 130 milyan oo ka mid ah waa dad u baahan in la caawiyo.
Waxaa la tilmaamay in lagu guuldaraystay ilaalinta sharciga caalamiga ah ee bini’aadaminimada.
Xoghayaha guud ee QM, wuxuu ugu baaqay dowladaha caalamka, ganacsiyada iyo hay’adaha gargaarku in ay go’aansadaan in kala bar ay noqdaan tirada dadka guryahooda ka barakacay marka la gaaro sanadka 2030.
Wuxuu yiri si siman in loo qaybsado ayaan filaynaa.
Hadda kadib waa in cid walba ay mas’uuliyad iska saartaa.
Dowladda Soomaaliya ayaa Kenya ugu baaqday in ay ku soo noqoto wadaxaajoodka sadex geesoodka ah ee labada dowladood iyo Qamada Midoobay u socday.